Waa Kuma Fannaanka u tartamaya xilka madaxweynaha Mareykanka ee laga yaaban yahay? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWaa Kuma Fannaanka u tartamaya xilka madaxweynaha Mareykanka ee laga yaaban yahay?
Washington (JO) – Kanye West ayaa si rasmi ah u billaabay ololihiisa doorashada 2020-ka ee madaxtinimada Mareykanka, wuxuuna isu soo bax kala daadsan ku qabsaday magaalada Charleston ee South Carolina.
West, oo 43 sano jir ah, waa musharax madaxbannaan oo qaabkiisa u gaarka ah ugu tartamaya doorashada Mareykanka.
Hadal uu ka jeediyay isu soo baxa, wuxuu fannaankan u muuqday inuu go’aano siyaasadeed oo waaweyn uu ka hadlay isagoo xitaa aan isu soo diyaarin – arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa ilmo-iska soo xaaqidda iyo hawwenydii lagu magacaabay Harriet Tubman.
Taageerayaashiisa ayaa la yaaban Fanaanka, waxayna is weydiinayaan sababta uu xilligan kala guurka u billaabay ololihiisa doorashada. Dadka qaar waxay u arkaan inuu isku soo caanbixinayo.
Isu soo bixii Charleston waxba kama badalin shakiga laga qabo in ay daacad ka tahay ololaha doorashada madaxweynaha Mareykanka uu ugu jira.
Sidoo kale, farriin uu, Kanye West, Sabtidii Twitter-ka soo dhigay oo laga tiray hadda, waxay sii xoojisay wararka la isla dhexmarayo ee shakiga abuuraya.
Kullan uu ku qabtay hoolka shirarka iyo aroosyada ee magaalada, waxaa la sheegay inuu u furnaa martida gaarka ah ee is diiwaangelisay oo keli ah, balse boggiisa ololaha doorashada maba ahan mid shaqeynaya oo dadka ay isku diiwaangelin karaan.
Muxuu Kanye West ka dhahay kullanka?
West wuxuu timaha ku soo dhex qortay “2020”, waxaana u xirnayd jaakadda xabada celisa, wuxuuna dadkii isu soo baxay la hadlay isagoo aan mikrafoon haysan.
Sidoo kale, dadkii dhageysanayayna ma aysan haysan mikrafoon, taas oo sababtay in Kanye West uu dadka weydiistay in ay aamusaan si uu u maqlo su’aalihii la weydiinayay.
Wuxuu billaabay inuu ooyo markii uu ka hadlayay shuruucda la xiriirta ilmo iska soo xaaqidda, isagoo sheegay in waalidkiisa ay ku dhowaadeen in isaga xitaa la soo tuuro: “Kanye West ma jiri lahayn, sababtoo ah aabahey aad ayuu u mashquulsanaa.”
Wuxuu intaa ku daray: “Waxaan ku dhowaaday in aan dilo gabadheyda… xitaa haddii xaaskeyda [Kim Kardashian West] ay iga tageyso hadalkan ka dib, waxay dunida ku soo biirisay oo ay dhashay gabadheyda North, iyadoo aniga aanan doonayn arrintaas.”
Balse, wuxuu ku adkeystay inuu aaminsan yahay in ilmo iska soo xaaqidda laga dhigo sharci dadka u fududeynaya waxa ay rabaan, ayna taageero dhaqaale helaan hooyooyiinka cusub ee dhibaateysan – wuxuuna yiri “qofkasta oo canug haysta waa inuu helaan $1 milyan oo dollar”.
“Waxa keliya ee aan xor ku noqon karno waa in aan u hoggaansanno sharciga aan ku haysano dhulka barwaaqada. Ilmo iska soo xaaqidda waa in sharciga uu fasaxaa sababtoo ah ma ogtahay, kan ma ahan sharciga Alle, marka muxuu noqonayaa sharci ahaantiisa?”
Wuxuu sidoo kale, isagoo aan waxba kala socon, billaabay inuu ka hadlo haweeneydii qarnigii 19-aad u ololeyn jirtay in ilmaha uurka ku jira la iska soo xaaqi karo, Harriet Tubman.
“Harriet Tubman weligeed maysan xoreynin qof la adoonsanayay, keliya waxay dadka ku qasbi jirtay in ay u shaqeeyaan dadkii caddaanka ahaa ee adoonsanayay,” ayuu yiri – waxay ahayd farriin sababtay in taageerayaashiisa ay aad u qeyliyaan.
Wuxuu sidoo kale ooyay mar uu ka hadlayay hooyadii oo dhimatay 2007-dii, xilli qalliin jir qurxin ah lagu sameynayay.
Kanye West si dhab ah ma uga soo muuqan doonaa warqadda codeynta?
West, oo musharaxnimadiisa ku dhawaaqay 4-tii July, wuuba lumiyay fursaddii uu uga faa’ideysan lahaa musharaxnimada, waana laga soo gudbay xilligii is diiwaangelinta, marka uma qalmin inuu musharax noqdo.
Wuxuu u baahan yahay inuu helo saxiixayaal aad u badan si uu magaciisa warqadda codeynta uga soo muuqdo.
Isbuucii la soo dhaafay, wuxuu magaciisa ka soo muuqday warqadda codeynta madaxweynaha ee Oklahoma, ka dib markii uu soo buuxiyay shuruudaha, ka hor xilligii kama dambeysta.
Sidoo kale, si magaciisa loogu soo daro warqadda South Carolina’, waa in uu helo illaa 10,000 oo saxiixayaal, uuna gudbiyo ka hor 08:00GMT ee xilliga geeska AFrika.